Surface treatment ဖောင်းကြွ, Glossy Lamination, Matt Lamination, ပုံနှိပ်ခြင်း, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, သုတ်ဆေး
ပုံနှိပ်ခြင်းanew Heidelberg six-color plus oil presses, Two- အရောင် Roland, လေးအရောင်စက်, Heidelberg monochrome စက်, 6-ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပုံနှိပ်ခြင်း၊, အလိုအလျောက်အပြည့်, semi-automatic screen printing presses
Finishing Foil-Stamping, ဖောင်းကြွ, Glossy Lamination, Matt Lamination, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်.
အသွင်အပြင် High-quality, durable and strong
Paper type အနုပညာစက္ကူ, ivory paper, kraft စက္ကူ,corrugated paper etc.
ပို့ဆောင်ချိန် 6-9DAYS according to customer choose express:FEDEX,DHL,ယူပီအက်စ်,SF-EXPRESS etc.
Package as customer's requirement:100pcs/bag, 500PC / Carton
ထုတ်လုပ်မှုအချိန် 10-15days after payment, the finial delivery time depend on last quantity;
1.Safety Packaging, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးထုတ်ကုန်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးပို့သူနှင့်အတူလျင်မြန်စွာပေးပို့
2.We areaFriendly, ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြကုမ္ပဏီ
Our factory covers an area of 5600 စတုရန်းမီတာ, equipped with advanced domestic production equipment and first-class technical force, has well-trained 100 workers, management staff of 15 people, 20 technical personnel. We supply at least3times QC before shipping.
အမှတ်အသားများ (Tags)：စက္ကူဘူး, ခေါင်းအုံး Box ကို